Eyona ndlela yokuLawula iiAkhawunti ezininzi zeTwitter | Martech Zone
Eyona ndlela yokuLawula iiAkhawunti ezininzi zeTwitter
NgoLwesine, Aprili 7, 2016 NgoLwesine, Aprili 7, 2016 Douglas Karr
Nceda undixelele ukuba usavuya kuTwitter… Ndiyalithanda iqonga kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kuhlala ndikhona. Oko bekuthethile, ndizabalazile iinyanga kunye nokusetyenziswa okungagqibekanga kwe-desktop ye-Twitter kwi-Mac. Inkqubo yam iya kucotha ukuya kukhasa, kwaye i-Twitter iya kugqibela ngokungaphenduli. Ndicinga nje ukuba abaphuhlisi kunye nabantu beQA abavavanya i-app abanabalandeli abaninzi kunye nohlaziyo oluninzi kulo lonke usuku njengoko ndenzayo.
I bekunjalo usebenzisaHootsuite kodwa ibingeyonto intle kangako. Ujongano lomsebenzisi lucekeceke, kwaye andikholelwa ukuba isithuba sibekwe kakuhle phakathi kweetweets, ke konke kubonakala kufiphele. Kwaye ndiyakuthanda ukuba ne-app evulekileyo kunesikhangeli kuba bendisoloko ndivale isikhangeli ngengozi.
Emva kweminyaka ndingayisebenzisi, ndaye ndagqiba kwelokuba ndikhuphele TweetDeck kwaye uzame enye. Ngaphakathi kupapasho lwethu, incwadi yam, umsitho ozayo, kunye neqonga lethu le-imeyile, ndilawula iiakhawunti ezisibhozo. Ewe, ibiyiphupha elibi… kude kube ngoku!
I-TweetDeck IiAkhawunti ezininzi zibandakanya:
Ukubeka esweni amaxesha amaninzi kunxibelelwano olunye olulula.
Ishedyuli yeeTweets eziza kuthunyelwa kwikamva.
Vula izilumkiso ukugcina ulwazi oluvelayo.
Ukucoca ukukhangela ngokusekwe kwiikhrayitheriya ezinje ngokubandakanya, abasebenzisi kunye nohlobo lomxholo.
Yakha kwaye uthumele ixesha lesiko lokubeka kwiwebhusayithi yakho.
Sebenzisa iindlela ezimfutshane ezinqumlayo zebhodi yezitshixo.
Thulisa abasebenzisi okanye amagama ukuphelisa ingxolo engafunekiyo.
Ungaze uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde lula khona: I-TweetDeck yexesha elifanelekileyo lihamba ngexesha langempela.
Khetha umxholo okhanyayo okanye omnyama.
TweetDeck Nokuba ibandakanya uLawulo lweQela!
Mhlawumbi eyona nto yothusayo xa kuziwa kwi-TweetDeck yile ulawulo lweqela yakhiwe ngqo kwisicelo! Ndinako ngokulula yabelana ngeakhawunti phakathi kwamalungu eqela Ngaphandle kokuhlawula umrhumo wephepha-mvume lomsebenzisi okanye, okubi ngakumbi, kwiqonga lolawulo lwentlalo. Ndivula nje useto lweqela kwaye ndongeza iiakhawunti zeTwitter nokuba baya kuthi Tweet nje ngaphandle kweakhawunti okanye babelane ngobunini!
Kukho konke ukunyaniseka, ndiyakholelwa ukuba i-Twitter kufuneka ithathe umhlala-phantsi kwi-desktop yayo ye-OSX kwaye inike i-TweetDeck endaweni yoko. Isebenza ngokugqibeleleyo. Andiqinisekanga ukuba izakwenzeka, nangona kunjalo, kwinyanga ephelileyo i-Twitter yazisa ukuba yayiyiyo ukuvala uguqulelo lweWindows, ifuna abasebenzisi beWindows ukuba bangene kwisicelo sewebhu endaweni yoko.
I-TweetDeck isafumaneka njenge I-Chrome App kwaye Usetyenziso lweMac okwangoku. Kubonakala ngathi inkqubo yeWindows igcinwe umhlala phantsi ngenxa yokuba bekungekho lula kuyo lawula iziqinisekiso ze-Twitter ngokufanelekileyo.
Nceda unike i-TweetDeck ukuzama ukuba uku-Mac kwaye ubonise usetyenziso olunothando kwezinye iireyithingi zeVenkile ye App! Nda!
tags: lawula iiakhawunti ezininzi ze-twitterTweetdeckTwitterUlawulo lwe-twitterUlawulo lweqela le-twitter
IHarmony Iphehlelela iNdawo yokuDibanisa iMisebenzi kwi-Jobs…
Inkonzo yabaThengi engalunganga iyenzakalisa i-ROI yakho yokuthengisa
Epreli 7, 2016 ngo-9: 25 AM
Ndiyavuma! Kum, i-Twitter yeyona iqonga loluntu lisebenziseka lula. Kutshanje ndiye ndaqala ukusebenzisa i-TweetDeck kwakhona, kwaye ndiyifumana iyasebenziseka. Enkoso ngokwabelana!